အမျိုးသားဘက်မှအမြင်နှင့် အမျိုးသမီးဘက်မှအမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » အမျိုးသားဘက်မှအမြင်နှင့် အမျိုးသမီးဘက်မှအမြင်
Posted by moonpoem on Sep 7, 2011 in Society & Lifestyle, Think Different | 18 comments
(ဖတ်မိတဲ့ ဟာသတစ်ခုကို ကိုးကားပြီး ကိုယ့် စိတ်ကူးနဲ့ ပြန်လည် ရေးသားထားခြင်းလို့ ဦးစွာ ၀န်ခံပါရစေ။)
ဖတ်ထားတဲ့စာက အနောက်နိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကြီး တွေက သူတို့ ရဲ့ ဝန်ထမ်းခန့်ထားရေး မှာ အမျိုးသားဝန်ထမ်းနဲ့ အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားလေးတွေကို သရော် ထားတာလေးပါ။ ဖတ်ပြီးပြီးချင်းတော့ အမျိုးသမီးထုကြီးဘက်ကနေ စိတ်တိုမိပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ်လည်း သူပြောသလို တွေးနေမိပါလားလို့ ပြုံးမိပါတယ်။
အမျိုးသားတယောက်သာ မနက်စောစောစီးစီး ရုံးတက်ချိန်သမ်းဝေနေရင် မနေ့ ကဘောလုံးပွဲကြည့်လို့ နေမှာပေါ့။အမျိုးသမီးတယောက်သာ စောစောစီးစီး အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေရင် မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး အစောကြီးရှိသေးတယ် လူမြင်မကောင်းဘူး အိပ်ချင်နေတာ လွန်လွန်းတယ်လို့ တွေးပါသတဲ့။
အမျိုးသားတယောက်ကသူ့စားပွဲပေါ်မှာမိသားစုဓာတ်ပုံတင်ထားရင်သူဟာ အရာရာကိုအလေးအနက်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်
အဲဒါဟာအမျိုးသမီး တယောက်ဆိုရင်တော့သူမအတွက်မိသားစုဟာ အလုပ်ထက်အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆတယ်တဲ့
အမျိုးသားတယောက်က အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ခွင့်ယူရင် သူ့ ခမျာ မအားရှာလို့ ။
အမျိုးသမီးတယောက်သာ ခွင့်ယူရင်တော့ အင်းအကြောင်းပြပြီး ရည်းစားနဲ့ ချိန်းတွေ့ မလားမသိဘူးတဲ့။
အမျိုးသားတယောက် ရဲ့စာ:ပွဲဟာစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ပြန့်ကျဲနေရင် သူဟာအလုပ်ကြိုးစားသူတယောက်
အမျိုးသားတယောက် ဟာသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့စကားပြောနေရင် ဒါသူတို့ အချင်းချင်းနောက်ဆုံးစီးပွါးရေးသတင်းကို ဆွေးနွေးနေကြတာ
အမျိုးသားတယောက်ကသူ့ အလုပ်ရှင်နဲ့ နေ့လည်စာတူတူစားရင် သူရာထူးတက်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီ
အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်တော့သူ တို့မှာ လူမှုရေးဖောက်ပြန်ရှိနေ တာဖြစ်နိုင်တယ်
အမျိုးသား တယောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ရင် သူ့ဘဝ က ပိုပြီးတည်ငြိမ် သွားတော့မယ်
အမျိုးသမီး တယောက်ကအိမ်ထောင် ပြုလိုက်ရင်တော့ သူ ကလေးမွေးဖွားခွင့်ယူတော့မယ်
အမျိုးသားတယောက်က အလုပ်အသစ်ရလို့ ပြောင်းသွားရင် ဒါသူ့ရဲ့ တက်လမ်း အတွက်သူသွားတာ
အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်တော့ မိန်းမတွေဟာ အလုပ်တခုမှာဘယ်တော့မှ ကြာကြာအားကိုးလို့မရဘူးတဲ့
အမျိုးသားတယောက်ရုံးပြန်ခါနီး ဖုန်းဝင်လာပြီး အေးငါလာခဲ့မယ်ကွာလို့ ပြောရင် သူ့ အပေါင်းအသင်းတွေကို ချိန်းပြီး တွေ့ မလို့ နေမှာ လို့ တွေးပြီး ။
အမျိုးသမီးတယောက်က ရုံးပြန်ခါနီး ဖုန်းဝင်လာပြီး အေးငါလာခဲ့မယ်လို့ ပြောရင် သူ့ ရည်းစားနဲ့ ချိန်းထားတာဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိတတ်ကြပါတယ်တဲ့။
ကဲဟုတ်လားမဟုတ်လား စမ်းစစ်ကြည့်ကြပါဦး။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်တယ်လို့ ပြောရအောင်ကလဲ ကိုယ်ကအမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်
အဲတော့ ဝိနည်းလွတ်ပြောရရင်တော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဆိုရင်ပေါ့နော် တို့က အဲဒီအကြောင်းတွေ သိပ်ပြီး မသိဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့နော်
ကိုယ့်ဘက်က ကြည့်တော့ လက်ဖ၀ါး….
သူ့ဘက်က ကြည့်တော့ လက်ဖမိုး….
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲမြင်မြင် ကိုယ်ကောင်းရင်ခေါင်းမရွေ့ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ အမျိုးသမီးပေမယ့်လည်း ရဲရဲရင့်ရင့် ရပ်တည်ပါ။
ကိုယ် လည်း မမပြောသလို ပဲ..၀င်ပြောသါားတယ် လို့ ထားလိုက်
ကိုယ် လည်း မမပြောသလို ပဲ..၀င်ပြောသွါးတယ် လို့ ထားလိုက်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် နှာတဖျားသာတယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကနေချင်သလိုနေလို့သိပ်မထူးပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေနေချင်သလိုနေရင်တော့ ဣနြေ္ဒမရှိဘူးလို့အပြောခံရတတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်နေရာကိုယ်တန်ဘိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီး အမျိုးသားလို့ ၀ိဝါဒကွဲနေမဲ့အစား ငါတို့သည်လူသားများဖြစ်သည်ဟူသော အမြင်ဖြင့် နေတတ်ရင်ကြေနပ်စရာပါ။
နှာတဖျားသာတယ်ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ မဟုတ်ဘူး … မြန်မာ့အသိုင်းဝိုင်းမှာ ရှေးရိုးစွဲ အယူတွေ ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ကြတာတွေကြောင့် အဲ့ဒီအတွေးကြီးက ၀င်နေတာ … ။ မိန်းမဘ၀ ဘယ်လောက် မြင့်မြတ်သလဲ … စိတ်ဒုက္ခခံပြီး ကိုယ်ဝန်လွယ်တယ် .. အသက်နဲ့ ရင်းပြီး မွေးဖွားရဲတယ် … ။ ဒီလို သတ္တိမျိုးက မိန်းမတွေမှာပဲရှိတယ် …
မမ လမင်းကဗျာ ကြီးဘာလို.ဒီစာတင်သလဲ သိချင်ပါ၏
ကျနော်ကတော. ထောက်ခံသဗျ စာလေးတွေကို
အင်းဟုတ်တယ် အဲဒီစာရေးသူက မိန်းကလေးပဲဖြစ်ရမယ်.. မူးရင်းစာကိုပြောတာနော်..
ဒီလိုပါပဲ အဲဒါသူများကိုလိုက်ကြည့်နေတော့ အဲလိုပဲစဉ်းစားမိနေတာပေါ့… ဘယ်သူမှမကြည့်ပဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည့်ရင် အဲဒါထက်ဆိုးတာတွေ စဉ်းစားမိမှာ….
ယောက်ျားနဲ့မိန်းမ သမီးရည်းစားဘဝမှာဆိုရင် မြင်သူအပေါင်းက ကျားကြီးနဲ့သမင်မလေး၊ အိမ်ထောင်လည်းကျရော ကျားကနေနွားဖြစ်၊ သမင်မကနေ ကျားမဖြစ်သွားပြီလို့ မြင်ကြပါသတဲ့..။
ဟုတ်သလိုလိုတော့ရှိသားနော် ဒါပေမယ့် အမြင်ဆိုတာ ကြည့်သူအပေါ်မှာသာသက်ဆိုင်တာပါ မူတည်တာပါ အဲလိုတရားသေကြီးလဲမဟုတ်လောက်ပါဘူး
မိန်းမတွေ အပေါ်ဘယ်လိုဘဲ တဆင့်နိမ့်အမြင်ရှိကြပါစေ ယောက်ကျားတွေနဲ့ တန်းတူလုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိကြတာက ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရမ်းကြီး ဂရုစိုက်လွန်းရင် အလုပ်ပျက်တယ်လို့ မြင်တာဘဲ။
အမလေးနော် မှန်လိုက်တာ။မိန်းကလေးဖြစ်ရတာတောင် စိတ်ပျက်ရမလိုဖြစ်နေပါပီ။
ပြောချင်တာတွေလည်း … ပြောကြပါစေကွယ် .. ဘ၀ဆိုတာရယ် … အဲ .. ယောင်ကုန်ပြီ ။
အမျိုးသမီးတွေ အားနည်းတယ် ပျော့ညံ့တယ် … ညဘက်မထွက်ရဘူး … ဘီယာမသောက်ရဘူး ….လမ်းသွားရင်း သီချင်း မညည်းရဘူး … လေမချွန်ရဘူး … ဘာဘူး .. ညာဘူး ခေတ်တွေ ကျော်လွန်ပါစေတော့ … ။
တချို့ မိန်းမတွေ ခေတ်နဲ့ တပြေးညီ သွက်လက်ထက်မြက်ပြီး ရင်ဘောင်တန်း လုပ်ကိုင်လာနိုင်တာ … အရမ်းကို ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ် … ။
ဒါပေမဲ့ တချို့ မိန်းမတွေ .. အားနွဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ လက်ကြောမတင်းတာကလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် .. :mad:
တချို့မိန်းမတွေ လက်ကြောမတင်းချင် အပျင်းထူချင်လို့လည်း တချို့ယောက်ျားတွေက
အရက်သောက်မူးရူးနေတဲ့ယောက်ျားကို ဈေးရောင်းကျွေးနေတဲ့မိန်းမမျိုးကျတော့ နှာတစ်ဖျားမက သာသွားပြန်ရော
ယောက်ျားတွေကိုယ့်ကိုကိုယ် အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ပုံနဲ့နေပြီးလက်ကြောမတင်းရင် ပိတ်ရိုက်ပစ်ချင်တယ် :mad: